Daacish-ta Soomaaliya oo Nolosha ku qabatay Ciidamo katirsan Maamulka Puntlan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 28 January 2017
Wararka ka imaanaya Degmada Qandala ee gobolka Bari ayaa sheegaya in dagaalyahano katirsan Kooxda Daacish ay jidka u galeen gaari kasoo baxay Degmada Qandala kuna sii jeeday magaalada Boosaaso.
Guddoomiyaha degmada Qandala Shirin Maxamed Quurshe ayaa sheegay in dagaalyahano katirsan kooxda Daacish jidka u galeen gaari ay la socdeen dad shacab ah iyo Ciidamo katirsan maamulka Puntland.
Kooxda Daacish ayaa la sheegay in gaariga joojiyeen ayna kala degeen 9-nin oo la sheegay in qaarkood ay katirsanaayeen Ciidamada Maamulka Puntland ee ku sugan Qandala, waxa ayna Kooxda Fasaxday darawalkii gaariga waday, caruur iyo haween la socday gaariga.
Wararka la helayo ayaa sheegaya in qaar kamid ah Ciidamada Puntland ee gaariga lagala dagay ay ka baxsadeen kooxda Daacish ayna lug ku galeen Degmada Qandala, waxaana wali la ogeyn xaalada qaar kamid ah dadkii kale ay Kooxda Daacish la degtay.
Ciidamada Maamulka Puntland ayaa la sheegay in howlgal u aadeen halka lagu arkay dagaalyahanada Daacish ee duleedka Degmada Qandala, waxa ayna Ciidamada isku dayayaan soo bad baadinta dadka ay kooxdaasi afduubteen.
Xasan Sheekh Iyo C/raxmaan Faroole Oo Kulan Xasaasi Ah Wada Qaatay